Ungazi njani ukuba bangaphi abantu abakule march - Geofumadas
Ukwazi ukuba bangaphi abantu abahambayo
NgoJulayi, 2009 Google umhlaba / imephu
... bekukho abantu be-50,000
... Andizange ndibone abantu abaninzi kangaka
Ewe, kulungile, masinike izifundo ezisisiseko koku, sisebenzisa izixhobo eziqhelekileyo zokuqonda, ke sizonwabisa ngelixa sidlula intlekele kwezopolitiko. Lo ngumzekelo, apho isikwere sasembindini sasizele, ndizamile ukujonga umfanekiso olungcono kodwa akwenzekanga ke ndibonisa oku:
1 Uyazi njani le ndawo
Eyona ndlela ilula yokusebenzisa uMhlaba kaGoogle, isixhobo sokulinganisa sokulinganisa esenzelwe ezi njongo tantiometric Iyasebenza. Isikwere sonke sinemilinganiselo ye-103 × 60 yeemitha, esisinika indawo eyiyo ye-6,180 yeemitha zesikwere.
Le yeyona ndawo iyonke yesikwere, kubandakanya iindawo ezingafikelelekiyo, iindawo eziluhlaza ezihlonitshwayo ngabantu okanye ezikhumbuzo. Kodwa masicinge ukuba oku kuyahambelana nendawo ezingqongileyo.
2 Ungalazi njani inani labantu
Eyona nto ilungileyo ngumfanekiso wasemhlabeni apho ungabona khona indawo ezigqubutheleyo, kodwa kule meko, nokuba ucinga ukuba isikwere sizele, ayiyinyani, iya kubahlulahlulahlulo somhlaba phakathi kwendawo umntu ahlala kuyo. uxinzelelo
Siza kuphatha kule meko i-0.36 yeemitha zesikwere kumntu ngamnye, ethandabuzwa ngokutsho kwe-euphoria, ithoni yegesi emathumbu okanye ubungakanani bebhanti ezifuna indawo, kodwa ngumzekelo walo msebenzi.
Ke inani lilonke labantu liya kuba:
I-6,180 m2 / 0.36 m2 = ngabantu be-17,166. (Ukuba isikwere sonke besizele)
Amajelo eendaba axele ukuba kukho i-50,000, iphantse yamaxesha e-3 okuba kuliphi isikwere
Kwelinye icala, imatshi eyenzeke kwiDyunivesithi yasePedagogical, ithathela ingqalelo ukuba iya kufikelela kwizibonelelo zeNdalo, iya kuthi izaliswe ngokupheleleyo, kubandakanya imingxunya, amadrowa ngaphandle kokugubungela, okanye i-craters engasetyenziswanga ngusodolophu. Ndisebenzisa oko njengesalathiso ukuthelekisa, kuba okwangoku kuyenzeka kwaye kunokuba kukuba ubude bukhulu (okanye bungaphantsi) ngokombono wenqaku, kuphela kwehelikopta endiza phezu kwendlu yam iyakungqina oko.
Ubude: I-1,000 yeemitha, Ububanzi: i-9.75 yeemitha (kuba yindlela enye kuphela), ngoko ke siya kuba nendawo ye-9,750 yeemitha zesikwere.
I-9,750 / 0.36 = 27,083 yabantu.
Kwakukho abo baye baxela ukuba kukho abantu be-300,000, phantse amatyeli alishumi elinanye ngaphezulu kunoko kunokulingana kuloo ndawo
3 Ungazi njani ukuba ngubani oxoka
Impazamo kukuba abezopolitiko baphinde, abanika imizekeliso yoqwalaselo lwabo abasebenza njengereferensi yobudenge kwaye loo nto ayilingani xa sikhumbula ukuba kuthetha ukuthini ukuba nenkundla epheleleyo. Ke, abezopolitiko bayasidida (ixesha leshumi elinanye), kwaye abantu balandela ukuqukuqela ukuya kuloo ndawo yokujonga.
Enye indlela yokuzibala kungabalwa iinyawo zabo kwaye bohlule ngezibini, hehe; Kodwa ukuba awufuni kuxabana nokusebenzisa uMhlaba kaGoogle, kukwahlula-hlula inani elithethwayo ngamajelo osasazo phakathi kwesiqingatha seminyaka yabantwana bakho kwaye mhlawumbi leyo yidatha esondele kwinyani.
Makhe sibone ukuba le ngxaki iphelile kwaye basivumela ukuba sisebenze ngoxolo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iintsuku ze-6 ezitshintshile ubomi bethu
Post Next I-Honduras: ezinye izinto eziphambeneyo okanye ezifanelekileyoOkulandelayo "
I-2 iphendula ku- "Yazi njani ukuba bangaphi abantu abatsha kuhambo"
Inqaku kunye nemifanekiso ivela kwi-2009, xa kuhlanganiswa i-Honduras.
Ndiyabulela kuwe ngokusebenzisa ulwazi lwakho ukukhubaza abantu ngenene, amajelo eendaba afune ukuhambisa ingqondo kubantu kodwa ngokwabo aginye yonke into, bye imibuliso.